Maxaad Kala Socotaa Hadimada Qaadka Iyo Cudurka Korona Fayras? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Mawliid Axmed Xassan — April 27, 2020
Sidaan wada ogsoonahay qaadku waa aafo haysata bulshadeena taas oo ragaadisay horumarka, hab fikirka, qoyska, ilaha dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee uu u baahan yahay wadanku. Qaadku waa aafada aynu ognahay dhibtiisa, sidoo kalena aynu garanayno xalka iyo dawadiisa, hadana aan lagu dhaqaaqayn oo la iska dawaynayn.
Macluumaad ku saabsan qaadka.
1. Ma ogtahay in ereyga qaad marka xaga danbe laga soo akhriyo uu noqonaayo “DAAQ”.
2. Ma ogtahay in erayga MIRQAAN uu ka kooban yahay laba eray oo kala ah: MIR oo macnihiisu yahay marka habbeenkii xooluhu daaqaaan (mirtaan). Ama weerarka habbeenimo, sida col habbeenkii wax laayey oo kale. Erayga kalana wuxuu yahay QAAN oo macnihiisu yahay Dayn marka xoolo dadka kale leeyihiin aad qaadato (daynsasho). Hadaba marka la isku daro labada eray waxay noqonayaan MIRQAAN oo ah cunida ama mirasha xoolaha dadka kale, ogolaansho iyo ogolaansho la’aanba.
3. Ma ogtahay inuu qaadku yahay geedka kaliyaa ee ay ku heshiin la yihiin dadka iyo xooluhu (ama ay wada cunaan gaar ahaan raga iyo riyuhu).
4. Ma ogtahay in qaadku yahay waxa kaliya ee aan laga dhargin.
5. Ma ogtahay qaadku in uu yareeyo arimaha aasaaska u ah NOLOSHA sida:
● Galmada( farxada iyo raaxada qoyska).
Haddii arimahan la waayo ama ay yaraadaan waxa khalkhal galaysa nolosheena ama wax dhadhan ah aan yeelanayn. CUNISTA QAADKA iyo HALISTA CUDURKA CORONAVIRUS.
Sidaan la wada socono ayaamahan caalamka waxa wareeriyey cudurka coronavirus kaas oo laga soo sheegaayo inuu soo gaadhay dawlaha jaarkeena (ethiopia iyo kenya) oo uu qaadku inooga yimaado.
Waxaana ognahay in cudurkani ku faafo taabashada, sidaa darteed hadii qofka qaadka ka shaqaynaaya ama soo guraaya uu cudurkani ku dhaco waxa shaki la’aan ah in uu ku dhacaayo kii soo qaaday, ka iibinaaya iyo ka cunaayaba, waa khatar hor leh oo ku soo waajahan umadeena ay tahana in laga hor tago oo wax laga qabto sida ugu dhakhsaha badan.
Waa fursad maanta lagu joojin karo daroogada cagaaran(qaadka). Fadlan la wadaag asxaabtaada yaan la dhayal san oo ha la gaadhsiiyo muwaadin kaste iyo cid kastoo ku shaqo leh.
Tags: Maxaad Kala Socotaa Hadimada Qaadka Iyo Cudurka Korona Fayras?
Next post Fayraska Karona: Saamaynta Dhaqaale ee Soomaaliya
Previous post Caalamka Wax Akhriska